မျက်ရည်တစ်စက်မှာ … အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ် – Shinyoon
မျက်ရည်တစ်စက်မှာ … အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်
…. မျက်ရည်ကျတယ် ၀မ်းနည်းလို့ လွမ်းဆွေးလို့ ဆိုပြီး တရားသေမတွက်စေချင်ဘူး … ၀မ်းသာလို့ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေ ရှိသလို နောင်တတွေနဲ့ နာကျင်လို့ ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေလဲ အများသားပါ ။ မျက်ရည်ဆိုတာ … ဦးနှောက်က စီးဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲ နှလုံးသားက ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလာတာမျိုးပါ ။
မ်က္ရည္တစ္စက္မွာ … အဓိပၸါယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနႏိုင္ပါတယ္
…. မ်က္ရည္က်တယ္ ၀မ္းနည္းလို႔ လြမ္းေဆြးလို႔ ဆိုၿပီး တရားေသမတြက္ေစခ်င္ဘူး … ၀မ္းသာလို႔က်တဲ့ မ်က္ရည္ေတြ ရွိသလို ေနာင္တေတြနဲ႔ နာက်င္လို႔ က်တဲ့ မ်က္ရည္ေတြလဲ အမ်ားသားပါ ။ မ်က္ရည္ဆိုတာ … ဦးေႏွာက္က စီးဆင္းလာတာမဟုတ္ပဲ ႏွလုံးသားက ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာတာမ်ိဳးပါ ။
ကျွန်မ နှလုံးသားက ထုံသွားပြီထင်ပါတယ်
ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့အထင်နဲ့ အသေအလဲချစ်ခဲ့ကြတာပါ